စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် စမ်းသပ်သည့်ပုံစံဖြင့် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြော - Kanbawza Tai News
Home ပြည်တွင်းသတင်းများ အစိုးရအဖွဲ့ စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် စမ်းသပ်သည့်ပုံစံဖြင့် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြော
စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် စမ်းသပ်သည့်ပုံစံဖြင့် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြော
May 20, 2020 ပြည်တွင်းသတင်းများ, အစိုးရအဖွဲ့,
အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် စမ်းသပ်သည့် ပုံစံဖြင့် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့် ပုံစံဖြင့် အောင်မြင်မည်ကို မသိရှိနိုင်သေးကြောင်း Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆို ခဲ့သည်။
အခြေခံပညာကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံ ပညာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ/ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စား လှယ် ဒေါ်နီလာဝင်း၊ ကျောင်းသားမိဘကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဌေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ မေလ ၁၉ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းက Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးစဉ် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယင်းကဲ့သို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးမှုတွင် ပထမဦးစွာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေမှု အခြေအနေ၊ ကလေးများ ပညာသင်ယူမှု အခွင့်အလမ်း ဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရေး အတွက် မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း အဆင့်အလိုက် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး စဉ်းစား ဆောင်ရွက်နေမှု၊ စာသင်ကျောင်းများတွင် ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုမရှိစေရန် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျောင်းသားမိဘများအားလုံး ပူးပေါင်း၍ စိန်ခေါ်မှုကို ကျော်လွှားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများကို လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နီလာဝင်းက စာသင်ကျောင်း များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့်အခါ သတိထားရမည့် အချက်များ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ အင်အားနှင့် စာသင်ခန်း နည်းပါးသည့် အခြေအနေတွင် COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သည့် ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံ ရမည့် အခက်အခဲ၊ မိမိကျောင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေသည့် ကျောင်းတက်သည့် ပုံစံကို မိဘများ၊ တာဝန် ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ထားရှိမှု၊ စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအဆင့်များကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် KG အပါအဝင် မူလတန်းအဆင့်မှ ကလေးသူငယ်များကို မိဘအကူအညီဖြင့် အိမ်တွင် သင်ကြားရေးစနစ် ကျင့်သုံးရေး အခြေအနေများကိုလည်းကောင်း၊ ကျောင်းသားမိဘ ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဌေးက စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျောင်းသား မိဘများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ မိုးရာသီတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိသည့် ရောဂါများအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်မှု၊ ကျောင်းကြို၊ ပို့ယာဉ်များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေး၊ ရောဂါပြန့်နှံ့မှု များသည့် ရန်ကုန်မြို့၌ သင်ကြားရေးတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဆရာ ဆရာမများအတွက် အွန်လိုင်းစနစ် မြှင့်တင်ပေးရေးနှင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိစ္စများကိုလည်းကောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြကြရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် စာသင်ကျောင်းများအား ရောဂါကာကွယ်ရေး ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်ရေး၊ ဆရာ ဆရာမများ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရေး၊ COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွန်ကြားချက်များကို ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားမိဘများ၊ ကျောင်းပို့၊ ကျောင်းကြို ပုဂ္ဂိုလ်များ သိရှိလိုက်နာအောင် ဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေ များကို ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမြင်၊ ဆရာဆရာမများ၏ အမြင်၊ ကျောင်းသားမိဘများ၏ အမြင်များကို ကြားသိရသည့်အခါ စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် မည်သည့် အဆင့်မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ရမည်ကို မိမိတို့ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားပြီး လက်တွေ့ကျကျဖြင့် ဖြစ်မြောက်အောင်မြင် အောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သည့်အခါ စမ်းသပ်သည့်ပုံစံဖြင့် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မည်သည့် ပုံစံဖြင့် အောင်မြင်မည်ကိုလည်း သေသေချာချာ မသိသေးပါကြောင်း၊ မိမိတို့ လေ့လာရသည့်နိုင်ငံများအနက် အများအားကျရသည့် နိုင်ငံသည် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသည် COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ထိထိ ရောက်ရောက် ကာကွယ်၊ တားဆီး၊ ကိုင်တွယ်ထားနိုင်သည့် အတွက် များစွာ လေးစားပါကြောင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ တွင်လည်း စာသင်ကျောင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် အခြေအနေချင်း များစွာ နီးစပ်သည့်အတွက် ယင်းနိုင်ငံ၏ အတွေ့အကြုံကို လေ့လာရန် အချိန်ရှိပါကြောင်း၊ COVID-19 ကာလတွင် ဆရာ၊ ဆရာမများကို စာသင်နည်းများ ပြန်လည်သင်ကြား ပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများကလည်း သင်ယူရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ COVID-19 ကာလတွင် မိဘ၊ ဆရာများကိုလည်း သားသမီးများ၏ ပညာရေးအတွက် အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီး မည်သို့ဆောင်ရွက် ရမည်ကို အသိပညာ ပေးရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိဘ၊ ဆရာများ ကိုယ်တိုင် ကလည်း ယခုဆွေးနွေးပွဲကဲ့သို့ သိသင့် သိထိုက်သည့် ကိစ္စရပ် များကို အကြံပြုရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ယခုလို အကြံပြုမှ၊ ရှင်းပြမှ ကျောင်းသားမိဘများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ် ဇွန် ၁ ရက်သည် အခြေခံပညာကျောင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်ရက် ဖြစ်သော်လည်း ယခုနှစ် တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဖြစ်ပွားနေသော COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှုအခြေအနေများအရ ယင်းနေ့တွင် ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ ဇူလိုင်လအတွင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေလျက် ရှိသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၌ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်က အထက်တန်းကျောင်း၂၇၂ ကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်း (ခွဲ) ၁၉၀ ကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း ၂၈၁ ကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ) ၃၄၀ ကျောင်း၊ မူလတန်းလွန်ကျောင်း ၇၉၃ ကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း ၃၈၀၂ ကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း (ခွဲ) ၇၀၁ ကျောင်း၊ တွဲဘက် မူလတန်းကျောင်း ၁၂ ကျောင်း ရှိပြီး စုစုပေါင်း ၆၃၉၁ ကျောင်း ရှိကာ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဂယက်ကြောင့် ယင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာ သင်နှစ် အောင်စာရင်းများကို လက်ရှိအချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
Tags # ပြည်တွင်းသတင်းများ # အစိုးရအဖွဲ့
Tags ပြည်တွင်းသတင်းများ, အစိုးရအဖွဲ့
သွေးကြွေးမှာ ဆွေးနွေးစရာ မရှိ
■ တောင်ကြီးမြို့၌ ယနေ့ မေလ ၅ ရက်တွင် ဒေသခံများက စစ်အာဏာသိမ်းမှု အလိုမရှိ‌ကြောင်းကို သွေးကြွေးမှာ ဆွေးနွေးစရာ မရှိကြောင်း လှုပ်ရှားမှုများ ပ...
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔၏ ပုန္းေအာင္းေနတတ္ေသာ လိုခ်င္စိတ္
ေက်ာ္လင္းထြန္း (ေခ်ာင္းဦး) . ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ အလြန္႐ိုးစင္းေသာ အျဖဴထည္သပ္သပ္ ကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ လိုရာပုံ...
ထွေအုပ်ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ စစ်ကောင်စီက ပြန်ပြောင်း
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကို အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ပြန်လည...
အင်တာနက် မရရှိသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရုံးမထုတ်ဖြစ်သေး
. နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်ကောင်စီမှ တရားစွဲဆိုထားသော အမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့ ဧပြီလ ၂၂ ရက် ရုံးချိန်းတွ...
လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႊခိုးတူးေနသည့္ ကုမၸဏီအား အျမန္ဆံုးစိစစ္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား
စိုင္းသိခၤသူ၊ ကေမၻာဇတုိင္း . ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိုင္းပိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဟိုပိုင္ေက်းရြာအတြင္း ေရႊ...